Markii aan ka hadlayno dadka kale, waxaan inta badan ka walwalaa go'aannada qiimaha iyo halista cambaareynta. Haddana qofna runtii waxba kuma fiicna. Qof kasta ama qof walba ayaa tirinaya wax kasta, wax alla wixii khaladaadkooda ah, maxaa yeelay qof kasta oo bini aadam ah ayaa leh.
Marka, miyaad joojin kartaa walaaca ku saabsan fikradaha dadka kale oo aad bilaawdaa inaad diiradda saarto sida aad naftaada uga fikireyso!
Waa maxay aragtidaada naftaada? Maxaan maqalnay ayaa yiri: "Dadku waa waalan yihiin, dadku waa xun yihiin, dadku si dhakhso leh ayey u wadaan, dadku ma jecla dadka", laakiin inta badan ma iloobaan inaan nahay qayb muhiim u ah isla dadkaas. Sidaad dadka kale u aragto lamaxirna sida aad naftaada u aragto.
Sep30 05: 55